Cudurka osteoarthritis-ka ee Hofta | Sababta, Calaamadaha, Kahortagga, Jimicsiyada, Daaweynta
Osteoarthritis-ka Hofta (Hip Osteoarthritis) | Sababta, astaamaha, ka hortagga iyo daaweynta
Cudurka osteoarthritis ee sinta waxaa sidoo kale loo yaqaanaa coxarthrosis. Cudurka osteoarthritis ee sinta (xirmo laabasho) waxay sababi kartaa labadaba xanuun wadajirka ah, dhaqdhaqaaqa oo yaraada iyo xanuun marka aad socoto. Maaddaama xirmooyinka laabatooyinka ay sii xumaanayaan oo ay gaarayaan heerar dambe oo osteoarthritis ah, waxaad sidoo kale filan kartaa calaamadaha iyo xanuunka aad dareento inay ka sii dari doonaan. Sidaa darteed, waxaa muhiim ah inaad si firfircoon uga shaqeyso ka hortagga si loo hubiyo inaad leedahay shaqo wanaagsan oo ku saabsan kala goysyada iyo muruqyada.
Cudurka 'osteoarthritis' wuxuu saameyn ku yeelan karaa dhammaan kala-goysyada jirka - laakiin wuxuu si gaar ah u saameeyaa kala-goysyada culeyska qaadaya, oo ay ku jiraan miskaha, jilbaha iyo cagaha. Maaddaama kala-goysyadu ay sii gaboobayaan sannadihii, carjawda gudaha kala-goysyadu si tartiib-tartiib ah ayey u burburin karaan xaaladaha ugu daranna, waxay sidoo kale sababi karaan in lafta ay ku xoqto xubnaha kala go'ay. Waxaad ka akhriyi kartaa waxyaabo dheeraad ah oo ku saabsan heerarka kala duwan ee osteoarthritis iyada.
Raac oo sidoo kale annagana nala mid Boggayaga Facebook og Channelkeena YouTube lacag la'aan, cusbooneysiinta maalinlaha ah ee caafimaadka.
Maqaalka, waxaan ku eegi doonnaa:
Astaamaha osteoarthritis ee sinta
Sababta osteoarthritis ee sinta
Is-cabiridda ka dhanka ah osteoarthritis sinta
Ka hortagga coxarthrosis
Daaweynta xanuunka osteoarthritis
Ogaanshaha cudurka osteoarthritis
Maqaalka waxaad ku baran doontaa waxyaabo dheeraad ah oo ku saabsan osteoarthritis sinta iyo sababaha, calaamadaha, ka-hortagga, is-tillaabinta iyo daaweynta xaaladdan caafimaad. Daaweynta jireed ee murqaha iyo kala-goysyada, iyo sidoo kale tababarka murqaha xasilloonida ayaa ka mid ah furayaasha looga hortago osteoarthritis-ka iyo xanuunka sinta.
Ma la yaabaysaa wax mise waxaad rabtaa in badan oo ka mid ah xirfad-yaqaannada noocan ah? Nagala soco boggayaga Facebook «Vondt.net - Waxaan kaa yareyneynaa xanuunkaaga»Ama Channelkeena Youtube (wuxuu ku furmayaa xiriiriye cusub) talobixin wanaagsan maalin kasta iyo macluumaad caafimaad oo waxtar leh.
Astaamaha Osteoarthritis ee Hofta
Calaamadaha xanuunka osteoarthritis-ka way kala duwanaan karaan iyadoo loo eegayo marxaladda isku xirnaanta jirka. Laakiin xitaa marxaladaha hore, osteoarthritis mishiinku wuxuu sababi karaa jilicsanaanta deegaanka, xanuunka iyo xanuunka laabatada.
Cadaadis maxalli ah oo ku yaal bannaanka ama hore ee misigta laabatada
Isugeynta bararka xoogaa yar
Xanuun aad u daran ayaa sababi kara luminta miisaanka sinta
Kordhi shilalka dhabarka iyo miskaha
Marka lagu daro astaamahan iyo astaamaha caafimaad, hoos u dhaca shaqada misigta waxay sidoo kale sababi kartaa waxaan ugu magacdarnay cilladaha magdhowga noolaha. Tani waxay ka dhigan tahay in xanuunka miskaha uu bixin karo aasaaska guuritaanka si ka duwan ama loo guuro nolol maalmeedka - tanina waxay sababi kartaa in qaabdhismeedyada kale ee jidhku noqdaan kuwo culus oo xanuun badan. Gaar ahaan dhabarka iyo miskaha ayaa si gaar ah u nugul haddii aadan si fiican u shaqeyn sinta - ha iloobin jilbahaaga, oo xiriir toos ah la leh sinta.
Maxaan ugu xanuunsanahay Hofta subaxa hore ama ka dib fadhiista?
Astaamo ahaan, sidoo kale waa run in osteoarthritis sinta ay ka xun tahay aroorta iyo ka dib isagoo fadhiya weli wakhti dheer. Tani waxay qayb ahaan sabab u tahay xaqiiqda ah, sida muruqyada jimicsiga ka dib, jidhku habeen kasta wuxuu isku dayi doonaa inuu hagaajiyo carjawda oo uu ku sameeyo dayactirka kala-goysyada. Muruqyada sidoo kale waxay yeelan doonaan wareegga dhiigga oo yaraada iyo kala-goysyada oo yaraada dheecaanka synovial-marka sidaa darteed waxay badanaa qaadataa waqti in lagu bilaabo subaxa hore. Way ku badan tahay dadka dhexdiisa, laakiin waxay muujin kartaa inaad qabtid dhibaatooyin muruqyada iyo kalagoysyada qaarkood ah oo ay tahay in la daweeyo.
Warar dheeraad ah ka sii aqri: - 6 Calaamadaha Hore ee Kansarka Caloosha
Cudurka 'osteoarthritis' wuxuu horseedi karaa dheef-shiid kiimikaadka miskaha
Osteoarthritis sidoo kale waxaa loo yaqaanaa osteoarthritis oo leh laabatooyin isku dhafan ayaa sidoo kale u keeni doona isbeddelo jireed xagga laabatada miskaha. Xirashada wadajirka ah waxay aasaas u tahay bararka caabuqa wadajirka ah ee sababi kara barar gudaha ah iyo casaan ah laabatada. Laakiin sidaan soo sheegnay, sidoo kale waa kiiska markii carjawda kala-goysyada ay jajabto oo ay lafaha u dhawaadaan lafaha, jidhku wuxuu ku jawaabi doonaa isagoo isku dayaya isku day dhan oo qalbi furan inuu isku hagaajiyo. Tani waxay sababi kartaa lafo dheeri ah oo la dhigo - yacni calcification iyo lafo miiqyada.
Sinta misigta, maahan in kal-soo-saarradan la arki doono ama aad ku ogaan doontid iyaga oo isha ku haya - taas oo ka soo horjeedda cudurka osteoarthritis ee suulka weyn, halkaasoo aad ku arki karto kubbad weyn oo laf ah oo ku taal salka suulka weyn. Markay tirakoobyadu badato - waa sii yaraanayaan oo yaraanayaan shaqeyntaada.
Dhererka Tallaabada Gaaban iyo Marxaladda
Sinta ayaa lagama maarmaan u ah inay awood u yeelato inay si caadi ah u socoto - waxay u dhaqantaa sidii wax naxdin leh iyo sida gudbiyaha miisaanka marka aad lugaha dhulka dhigto. Laakiin haddii carjawda ku jirta laabatada miskaha la xirto, tani waxay sababi kartaa dhibaatooyin.
Tani waa sababta oo ah waxay kuu horseedi kartaa inaad dhaqdhaqaaq yar ka yeelatid sinta - sidaas awgeed waxay kuu horseedi kartaa inaad qaaddo tallaabooyin gaagaaban markaad socoto, taas oo iyana ka caawinaysa kahortagga dhaqdhaqaaqa kordha. Ka dib oo dhan, dhaqdhaqaaqa caadiga ahi waa is-joogsi, maxaa yeelay wuxuu bixiyaa wareegga dhiigga iyo dheecaannada isku-dhafka ah ee sinta, laakiin garaac gaaban iyo addin, abaabulkan dabiiciga ah ee xubnaha iyo muruqyada ayaa lumay.
Maaddaama xaaladdu adkeynayso, waxay sidoo kale kuu horseedi kartaa inaad ku bilowdo garabka lugta halkaasoo sinta miskaha ay muhiim tahay. Tani waa war xun, maxaa yeelay waxay u horseedi doontaa xanuun kale magdhow muruqyada u dhow, dareemayaasha iyo kala goysyada.
Warar dheeraad ah ka sii aqri: - 10 Jimicsi oo loogu talagalay Miskaha Xun
Sababta: Maxaad osteoarthritis ugu dhacdaa sinta?
Xirashada iyo jeexitaanka guud ee kala-goysyada iyo osteoarthritis ayaa kordha markaan sii weynaano - taas oo ay ugu wacan tahay duugista iyo jeexitaanka dabiiciga ah ee nolol maalmeedka. Nasiib darrose, awoodda dayactirka ee jirku way sii xumaataa sannadihii la soo dhaafay umana shaqeyso sida ugu dhakhsaha badan in loo hagaajiyo carjawda sidii hore. Maaddaama lafa-beelka osteoarthritis-ka uu sii ballaaranayo oo carjawda badan ay gabowdo, shaqada dayactirkeeda sidoo kale wey sii weynaan doontaa oo way sii adkaan doontaa - taasna waxaa ugu wacan xaqiiqda ah inuu jiro carjaw yar oo celisa laabatada 'furan'.
Qaar ka mid ah sababaha halista ugu badan ee loo yaqaan 'osteoarthritis' ee sinta ayaa waxaa ka mid ah cayilnaanta, isku dheelitir la'aanta dhabarka (sida scoliosis - sababtoo ah xaqiiqda ah in tani ay badanaa keento culeys badan oo ku saabsan mid ka mid ah miskaha iyo kan kale), iyo sidoo kale taariikhda qoyska ee dhibaatooyinka wadajirka ah. Waxaa sidoo kale la diiwaangeliyay in jabka iyo dhaawacyada sinta ay u horseedaan osteoarthritis hore.
Is-cabbiridda iyo Ka-hortagga Osteoarthritis-ka ee Hip
Waxaa jira dhowr talaabo iyo talaabooyin ka hortag ah oo la qaadi karo si loo yareeyo fursada cudurka osteoarthritis. Miisaan caafimaad leh, jimicsi joogto ah iyo dhaqdhaqaaq wanaagsan ayaa ka mid ah sababaha ugu muhiimsan ee yareynta horumarka cudurka osteoarthritis.
Adiga oo labadaba ku tababaraya muruqyada u dhow, iyo sidoo kale inaad si joogto ah u sameysid jimicsi dhaqdhaqaaq ah - sida kuwa hoos ka muuqda - waxaad ku ilaalin kartaa wareegga dhiigga oo wanaagsan iyo murqaha oogada miskaha. Waxaan kugula talineynaa inaad isku daydo inaad sameyso kuwan, ama kuwa la mid ah, laylis maalin kasta.
Warar dheeraad ah ka sii aqri: - Maxaad Ka Baahan Tahay Inaad Ka Hadasho Cadaadiska Cadaadiska
Xiriirintani waxay ka furmeysaa daaqad cusub.
Daaweynta Osteoarthritis ee Hip
Waxaa jira dhowr daaweyn oo ku siin kara nasasho iyo hagaajin shaqeynaya. Waxyaabaha ay tahay inaad ku bilowdo maanta waa xoog maalmeed iyo jimicsi fidin si loo ilaaliyo shaqeynta, xoojinta sinta, iyo xoojinta wareegga dhiigga.
Daaweynta gacanta, oo ay ku jiraan abaabulka wadajirka ah iyo shaqada muruqyada, waxay si fiican u diiwaangashan tahay osteoarthritis iyo astaamaha. Daaweynta jireed waa inuu sameeyaa xirfadle caafimaad dadweyne. Noorway dhexdeeda, tan macnaheedu waa jimicsiga jimicsiga jirka, jimicsiga casriga ah ama dabiibaha gacanta.
Dad badan ayaa la yaabban in cilmi baaristu ay muujineyso in daaweynta noocaas ah ee murqaha iyo kala-goysyada ay runtii ka waxtar badan yihiin jimicsiga (1) markay timaado yareynta xanuunka iyo bixinta waxqabadka sinta ee sinta. Ka dib ka fikir sida ugu waxtarka badan ee daaweynta noocaas ah marka lagu daro laylisyada guriga ay noqon karaan? Dhakhaatiirta loo yaqaan 'chiropractors' ee casriga ah waxay daaweynayaan muruqyada iyo kala-goysyada, iyo sidoo kale in lagu baro jimicsiyada guriga si ay kuu siiyaan bogsashada muddada dheer.
Tallo Is-Caawinta Xanuunka Wadajirka ah
riixo Buuq (sida sharaabaad isdaba-joog ah oo gacan ka geysta kordhinta wareegga dhiigga muruqyada xanuunsan ama galoofisyo isdabamarin si gaar ah loo waafajiyay ka soo horjeeda calaamadaha laabotooyinka ee gacmaha - sida ay tahay osteoarthritis-ka gacmaha)
Tababar la leh Miniband (hab jilicsan oo habeysan oo jimicsi - loogu talagalay kuwa ka cabanaya laabotooyinka iyo osteoarthritis)
- Dad badan ayaa u adeegsada kareemka arnica xanuunka xanuunka ka dhasha kala-goysyada adag iyo murqaha oo xanuuna. Dhagsii sawirka si aad waxbadan uga akhriso sida arnikakrem kaa caawin kara yareynta qaar ka mid ah xaalada xanuunkaaga.
Qalliinka qalliinka: Hip prosthesis
Markaad ku jirto heerarka ugu dambeeya ee cudurka osteoarthritis, waxyaabo aad ayey u fogaadeen. Marxaladahaas, waxay u dhowdahay lafo ilaa lafo gudaha sinta misigta, taas oo iyaduna u horseedi karta avascular necrosis - taas oo ah, unugyada lafaha ayaa dhinta sababo la xiriira wareegga dhiigga oo yaraada. Markay ilaa hadda marayso, caadiyan waa sinta misigta oo ah tillaabada xigta - laakiin tani macnaheedu maaha inaad joojiso jimicsiga oo aad dhaqaaqdo, halkii aad ka soo horjeedsan lahayd.
Tababbarka qalliinka ka hor iyo qalliinka ka dib wuxuu gacan ka geysanayaa in unugyada jilicsan iyo jilicsanaanta agagaarka sanaaciqda ay ahaadaan kuwo caafimaad qaba oo hagaagsan - marka hubi inaad raacdo tababarka dhaqancelinta ee lagugu baray warqadda.
Sidoo kale aqri: - Sida loo Aqoonsado Calaamadaha iyo astaamaha istaroogga
Baadhista Osteoarthritis-ka Hip
Cudurka 'Osteoarthritis' waxaa badanaa lagu ogaadaa isku dhafka-taariikhda, baaritaan caafimaad iyo sawir (badanaa raajo). Si aad u aragto baaxadda xirashada wadajirka, waa inaad qaadataa raajo - maxaa yeelay tani waxay ku tusaysaa unugyada lafaha sida ugu wanaagsan. Daraasaddan sawir-qaadista ah waxay awoodi doontaa inay indho-indheyso kaalsooyinka iyo dhaawaca carjawda.
Tusaalaha sawirka sawirka misigta waxaa laga arki karaa halkan:
Sawirka dhanka bidix waxaad ku arki kartaa inay boos fara badani ku jiraan laabatada miskaha. Sawirka dhanka midig waxaan ku aragnaa osteoarthritis muhiim ah oo laabatadu aad ayey uga yar tahay sida ay ahaan laheyd.
Haddii aad dhib kala kulantid astaamaha laga yaabo in lagu xasuusto osteoarthritis markaa waxaan kugula talineynaa inaad u geyso GP-ga si loo eego. Ogaashada illaa heerka osteoarthritis lafteeda ayaa sidoo kale bixin kara caddayn ku saabsan waxa aad ka yeeli lahayd is-cabiridda iyo ka hortagga, iyo sidoo kale daaweynta rugta caafimaad ee ruqsada u leh dadweynaha.
Sidoo kale aqri: - 7 Calaamadood oo ah Fibromyalgia ee Haweenka
Cudurka 'Osteoarthritis' waxaa lagu xakamayn karaa cabirro sax ah iyo tababar. Waxaan si gaar ah kuugula talineynaa inaad ku bilowdid xoog maalmeedka iyo leylisyada dharka si aad u ilaaliso miskahaaga kuwo caafimaad qaba oo hagaagsan. Daraasad ayaa sidoo kale lagu muujiyey in daaweynta buuga leh ee leh daaweeyaha jirka ama loo yaqaan 'chiropractor casri' ay saameyn aad u wanaagsan ku leedahay calaamadaha cudurka osteoarthritis ee sinta.
Xor ayaad u tahay inaad wadaagto aqoonta ku saabsan osteoarthritis
Aqoonta u dhexeysa guud ahaan bulshada iyo xirfadleyda caafimaadka ayaa ah habka kaliya ee lagu kordhiyo diiradda dhanka horumarka ee qiimeynta cusub iyo qaababka daaweynta ee ogaanshaha xanuunnada dabadheeraad. Waxaan rajeyneynaa inaad waqti siiso si aad arintan ugala wadaagto warbaahinta bulshada oo aad dhahdo waad ku mahadsantahay caawimaadaada. Wadaagistaada micno weyn ayey u leedahay dadka ay waxyeelladu gaartay.
Xor ayaad u tahay inaad riixdo batoonka kor ku yaal si aad dhexda u wadaagtid.
Caawinaad iskaa ah oo lagugula taliyo
Xirmooyinka Tababarka oo Dhamaystiran oo 6 Xoog oo Kala Duwan leh
Jimicsi leh jimicsiga xijaabku wuxuu hubiyaa in rarku ka yimaado jihooyinka aad rabto inaad ugu wanaajiso tababarka sintan diin. Jilibooyinka noocan oo kale ah waxay ku yimaadaan xoogag kala duwan waxaana lagugula talinayaa inaad si tartiib tartiib ah u kordhiso caabbinta markaad sii xoogeysato.
Halkan ka aqri faahfaahin dheeraad ah (daaqad cusub): Tababbarka tababbarka - Dejin dhammaystiran oo 6 Awoodo ah
Booqo haddii loo baahdo «Dukaankaaga Caafimaadka»Si aad u aragto alaabo badan oo wanaagsan oo is-daweyn ah
Guji masawirka ama isku xirka sare si aad uga furato Kaydka Caafimaadkaaga daaqad cusub.
Su'aalaha badanaa la isweydiiyo ee ku saabsan cudurka osteoarthritis-ka ee Hofta (Hip Osteoarthritis)
Dhedig (40 sano) wuxuu leeyahay,
Xog waxtar leh! Aad ayaad u mahadsantahay. Waxaan sii wadaagi doonaa boostada.
Salaan wuxuu leeyahay,
Hello. Hadda waxa laygu qalay sinta bidix, 13-kii Maarso. Guriga yimid 2 maalmood ka dib. Waa maxay tababarka ugu fiican maalmaha ugu horreeya? Shalay waxaan socday ilaa 4000 oo talaabo, maanta xanuun badan ayaa i haya mana gaarin 2000. Waxaan ahay 50 sano jir, ok qaab bilawga, laakiin wax badan oo aan weli fadhiyo 6 bilood ee ugu dambeeyay xanuunka dartiis. Xanuunku waa dibadda iyo gumaarka. Ma dulqaadanayo oo runtii wuxuu rabaa tababar badan. Waad ku mahadsan tahay jawaabtaada.